एमसीसीको पक्षमा उभिन प्रचण्डलाई आयो ३ बजेसम्मको अल्टिमेटम — Imandarmedia.com
एमसीसीको पक्षमा उभिन प्रचण्डलाई आयो ३ बजेसम्मको अल्टिमेटम
काठमाडौँ। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन शनिबार तीन बजेसम्मको डेडलाइन दिएको छ।
शुक्रबार राति बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग वार्ता सकेपछि काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘शनिबार तीन बजेसम्म प्रचण्डले पार्टीमा बैठक गराएर एमसीसी पास गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने गठबन्धन जोगिन्छ।
किनभने प्रचण्ड युर्टन गर्न माहिर हुनुहुन्छ । उहाँले युर्टन गर्नुभयो भने गठबन्धनको बाटोबाट अगाडि जान्छ। त्यसैका लागि शनिबार अपरान्ह तीन—चार बजेपछि मात्र एमालेसँग काँग्रेसले छलफलको समय राखेको छ।
ती नेताले भने, त्यो बेलासम्म एमसीसीमा म भोट हाल्छु भनेर प्रचण्डसँग सहमति भइसक्नुपर्यो । त्यो भएन भने काँग्रेस र एमालेबीच भोलि नै नयाँ घटनाक्रमको विकास हुन्छ ।
ती नेताका अनुसार शनिबार प्रचण्डले एमसीसी पक्षमा भोट हाल्ने ठाउँमा नपुगे काँग्रेस र एमालेले कुनै हालतमा उपाय निकाल्ने छन् । त्यसका लागि शनिबार अपरान्ह ओली निवास बालकोटमै छलफल हुनेछ ।
काँग्रेसले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ खोजेको छ। फागुन १६ गते एमसीसी पास गर्ने तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई साथमै उभ्याउने भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएका हुन्। देउवाले पुस २४ गतेदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद सुरु गरे पनि परिणाम निस्किन सकेको छैन।
यस​बीच प्रधानमन्त्री देउवाले तीन पटक ओली निवास बालकोट गएर छलफल गरेका थिए। एकपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल पनि गरे।
तर, एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन र एमालेको साथ जुटाउन देउवा अहिलेसम्म असमर्थ छन्। बिहीबार दिउँसो संसद भवनमा ओलीसहित एमालेका नेतासँग संवाद गरेमा देउवाले सोही साँझ पुनः संवाद गरेका थिए।
शुक्रबार माधव नेपाल र प्रचण्डसँगको छलफलपछि काँग्रेसका नेताहरुसँग आन्तरिक संवाद गरेका देउवा साँझ ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई साथमा लिएर देउवाले ओलीसँग करिब २ घण्टा संवाद गरेका थिए।
ओलीसँगको छलफलको सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी पास गर्न अलिकति सकारात्मक कुरा गरेको सुनाए । प्रचण्ड र माधव नेपालले भोट हालेर एमसीसी पास हुने भए आफूलाई कुनै आपत्ति नभएको जवाफ दिए ।
ओलीले भने, हामी त एमसीसी पास नै होस् भन्न चाहन्छौं । तर हाम्रो माग पूरा नभई हामी त भाग लिग पाउँदैनौँ । हामीलाई संसद प्रवेशमा सभामुखले रोक्नुभएको छ।
कुराकानी हुँदै जाँदा ओलीले प्रचण्डको विश्वास भने गरि नहाल्न सुझाएका थिए । ‘तपाईले एमसीसीको पक्षमा मत हाल्छ भनेर पत्याउनु भएको छ ? भोलि कुरा फेर्नुहुन्छ, ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि प्रचण्डले भोलि कुरा फेर्छन् कि भन्ने आशंका रहेको जवाफ फर्काए । मलाई पनि छ त्यो आशंका । त्यसैले त तपाईं सहयोग गर्नुस् न त।
तपाईं र हामी मिलौँ, एमसीसी पास गरौं। किन यसमा अल्मलिइराख्ने ? देउवाले ओलीलाई भने ।त्यसका लागि काँग्रेसले वातावरण बनाए आफू तयार रहेको ओलीको भनाइ थियो।
त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा र १४ सांसदको कारबाहीका विषयमा लामो छलफल भयो। एमाले नेताहरुले यी दुई विषयमा एमसीसी पास नहुनु पूर्व छिनोफानो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
तर, ओलीले सभामुख नहटाइ एमसीसीमा एमालेले भाग लिन नसक्ने अडान राख । काँग्रेस नेताहरुले भने फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै यी विषयमा त्यसपछि जान सकिने बताए।